Yila udliwanondlebe losuku
Udliwanondlebe nabaqulunqi abadumileyo kwihlabathi.
Funda udliwanondlebe lwakutsha nje kunye neengxoxo kuyilo, uyilo kunye noyilo phakathi kwentatheli yoyilo kunye nabaqambi abadumileyo behlabathi, amagcisa kunye nabayili bezakhiwo. Bona iiprojekthi zoyilo zakutshanje kunye noyilo lokuphumelela amabhaso kubayili abadumileyo, amagcisa, abayili bezakhiwo kunye nabavelisi. Fumanisa ukuqonda okutsha kubuchule bokuyila, ukuvelisa izinto ezintsha, ubugcisa, uyilo kunye noyilo. Funda malunga neenkqubo zoyilo zabayili abakhulu.